उत्तर कोरियाको सबैभन्दा खतरनाक कानुन ! दोषीको तीन पुस्ताले सजाय भोग्नुपर्ने – www.agnijwala.com
उत्तर कोरियाको सबैभन्दा खतरनाक कानुन ! दोषीको तीन पुस्ताले सजाय भोग्नुपर्ने
उत्तर कोरियाको सबैभन्दा डरलाग्दो कानून: उत्तर कोरियामा धेरै अनौठो कानूनहरू छन्, तर यसको बारेमा थाहा पाउँदा तपाईंको आत्मा हल्लाउनेछ। उत्तर कोरियामा किम जोङ उनको तानाशाही सरकार छ ।
उत्तर कोरियामा आत्महत्या सबैभन्दा ठूलो अपराध हो
अर्को देशमा फोन गर्नु अपराध हो
उत्तर कोरियामा तानाशाही सरकार छप्योङयाङ: उत्तर कोरियाको नाम आउनेबित्तिकै हाम्रो दिमागमा धेरै अनौठा कुरा आउँछन् । यो देशमा यस्ता धेरै अनौठा कानुन छन्, जसको बारेमा थाहा पाएपछि तपाई पक्कै पनि आफ्नो टाउको समात्नुहुनेछ । यो थाहा पाउँदा तपाईलाई हाँसो लाग्न सक्छ किनभने उत्तर कोरियाका जनताले आफ्नो देशका संस्थापक किम इल-सुङको आत्माले अझै पनि उत्तर कोरियामा शासन गरिरहेको छ भन्ने विश्वास गर्छन्।
सबैभन्दा डरलाग्दो कानून!
उत्तर कोरियाको सबैभन्दा डरलाग्दो कानून भनेको कुनै व्यक्तिले आत्महत्या गरेमा उसको सम्पूर्ण परिवारलाई सजाय दिइनेछ। यसबाहेक कसैले अपराध गरे तीन पुस्ताले सजाय भोग्नुपर्छ । तर, अन्य मुलुकमा अपराध गर्नेलाई मात्रै सजाय हुने कानुन छ ।
यो अपराधको लागि कठोर सजाय भोग्नुपर्छ
यदि तपाईं उत्तर कोरियामा बस्नुहुन्छ भने, तपाईंले कुनै पनि अन्य देशमा कल गर्न सक्नुहुन्न भन्ने कुरामा ध्यान दिनुहोस्। यस्तो गरेमा कडा सजाय भोग्नुपर्छ । यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय कल गर्नु अपराध हो। सन् २००७ मा एक व्यक्तिले धेरै अन्तर्राष्ट्रिय कल गरेपछि उनको हत्या भएको थियो ।
नागरिकलाई नजिकबाट नियालिएको छ
तपाईलाई बताउन दिनुहोस् कि उत्तर कोरियाको तानाशाही सरकारले आफ्नो देशका नागरिकहरूमाथि कडा नजर राख्छ। उत्तर कोरियाले टिभीमा आफ्नो मनपर्ने च्यानललाई मनोरञ्जनका लागि पनि हेर्न सक्दैन किनभने उत्तर कोरियाको नियन्त्रणमा रहेको टिभीमा तीनवटा च्यानल मात्र प्रसारण हुन्छन्।
विदेशी संगीत सुन्नु वा चलचित्र हेर्नु पनि उत्तर कोरियामा अपराध हो। यदि कसैले यो नियम उल्लंघन गर्छ भने उसलाई कडा सजाय हुन्छ। दोषीको सजाय उसले कुन देशको फिल्म हेरिरहेको थियो भन्ने कुरामा पनि भर पर्छ । मानौँ कसैले अमेरिकी फिल्म हेरिरहेको छ भने दोषीलाई मृत्युदण्ड दिइन्छ ।